FAMONOANA SEFO FOKONTANY : Nodoran’ny fokonolona ny tranon’ ilay nahavanon-doza
Nodoran’ny fokonolona ny tranon’ilay rangahy namono nahafaty nanetika tamin’ny antsibe ny lohan’ny sefo fokontany amperin’asa tao Antsalaka. 6 octobre 2017
Tsiahivina fa notetehin’ny rangahy iray noho ny resaka ady tany teo imason’olona ny lohan’ny sefo fokontany tany an-toerana andro vitsy lasa izay. Nandositra avy hatrany ilay nahavanon-doza taorian’izany, mbola tsy hita hatramin’izao. Mandeha ny resaka fa nanolo-tena tamin’ny zandary tao Anivorano avaratra ity farany ary efa naiditra am-ponja amin’izao araka ny vaovao voaray avy any Antsalaka.
Tsy mahatoky izany anefa ireo fokonolona fa nanasa ny ben’ny tanàna mba handeha aty amin’ny fonjan’Antsiranana hanontany ny fahamarinan’izany amin’ity herinandro ity.Araka ny fantatra hatrany dia manana tany midadasika ity rangahy voan’ny fakam-panahy ka nahavita namono olona ity. Araka ny fanampim-baovao hatrany dia efa avy namono olona tamin’ny tanàna fiaviany any Atsimo Andrefana ity rangahy namono sefo fokontany ity, ka izao nifindra toerana ao Antsalaka izao, mbola namerina ny fahazaran-dratsiny na dia efa nanorim-ponenana sady efa nahavory fananana aza. Voalaza fa miompy kisoa, manana omby, manana tany misy katy ary efa nanorina trano lehibe ilay ranamana.Noho ny hatezeram-bahoaka dia nodoran’ny vahoaka ny tranony, notapatapahana ny voly katiny, nalaina avokoa ireo omby sy kisoa. Rava tanteraka araka izany ny fananan’ilay rangahy noho ny hatezeram-bahoaka tamin’ny namonoany ilay sefo fokontany tao Antsalaka.
Araka ny fanazavana voaray tamina raim-pianakaviana monina ao Antsalaka dia tsy nanampo izay nahazo azy ity sefo fokontany ity, satria tamim-pahendrena no niantsoan’ilay rangahy nahavanon-doza ity azy. Tonga tany an-toerana nitsirika tany ny mpandrefy tany avy aty Antsiranana tamin’ny andro nitrangan’ny loza io. Izay voalaza fa tafiditra tao anatin’ny tanin’ilay rangahy ny sombin-tanin’olona mpifanila aminy. Tsy nahafaly azy anefa izany ka nantsoiny ity sefo fokontany izay nolazainy fa ilaina hijery ilay taratasy mahakasika izany.
Vantany vao niondrika naneho ireo antontan-taratasy ilay sefo fokontany dia notetehiny antsibe teo amin’ny lohany. Araka ny fitantaran’ireo nanatri-maso dia niparitaka ny betron’ity farany ary maty teo no eo. Manoloana io tranga io dia tsy manaiky ny raharaha ho vitavita ho azy ny fokonolona ao Antsalaka. Andrasan’izy ireo araka izany ny dian’ny ben’ny tanànan’Antsalaka aty Antsiranana, hanamarina raha efa naiditra am-ponja tokoa ilay rangahy namono nahafaty ilay sefo fokontany any an-toerana.